Qeybo ka mid ah Magalada Muqdisho oo banaanbaxyo ka Socdaan – hareerley
Qeybo ka mid ah Magalada Muqdisho oo banaanbaxyo ka Socdaan
Magalada Muqdisho waxaa goordhow ka bilaawday banaanbaxyo ay dhigayaan qaar ka mid ah ardayda waxka barata Iskuulada Waaweyn ee ku yaalla Magalada Muqdisho,kadib markii Wasiirka Waxrashada Soomaaliya uu sheegay in la hakiyey imtixaankii socday ee dowladda lana baabi’iyay.
Ardayda banaanbaxa dhigeysa oo qaarkood wata Dharka Iskuulada ay dhigtaan ayaa waxaa ay banaanbax ka wadaan inta u dhaxeysa Taalada Daljirka Daahsoon ilaa Madaxtooyada,sidoo kale Isgoyska Zoobe ilaa qeybo ka mid ah Wadada Maka Al-Mukarama.
Ardayda ayaa ka cabanaya sababta loo joojiyey Imtixaanka oo mudo Saddex maalin ah socday oo uu dhaqaalo farabadan uga baxay,iyada oo Wasiirka Waxbarashada uu sheegay in imtixaanka gebi ahaanba la baabi’iyey, dibna loo bilaabi doono 27-ka Bishaan.
Markii Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada uu ku dhawaaqay go’aanka ah in la joojiyey Imtixaanka ayaa waxaa ka dhashay kala aragti duwanaan dadka ah,iyada oo qaarkood ku taagereen qaarna ay kasoo horjeesteen.
Ardayda iyo dadweynaha kale ee banaanbaxa dhigaya ayaa waxaa mararka qaar rasaas ku ridaya Ciidamada dowladda Soomaaliya.
← Imtixaankii dugsiyada sare ee Soomaaliya oo fashilmay.
Diyanet Mosque in US suffers large-scale damage →